Doria Ragland kpalitere ntiwapụ Oprah Winfrey mgbe ọ kwusịrị na 'e nyere ya ego maka ajụjụ ọnụ'
Doria Ragland mere ka Oprah Winfrey gbawaa mgbe ọ kwusịrị na 'e nyere ya ego maka ajụjụ ọnụ'
Ọkachamara Royal: Doria Ragland kwesịrị iso Meghan gbadata warawara
Nwoke 64 dị afọ nabatara nwa ya nke abụọ Meghan n'ụwa, ya na Lilibet Diana Mountbatten-Windsor mụrụ na Fraịde na California. Lilibet sonyere nwanne ya nwoke dị afọ abụọ bụ Archie Harrison n'ezinụlọ Meghan, ya na nna ha bụ Prince Harry. A maara Doria nke ọma maka mmekọrịta chiri anya ya na nwa ya nwanyị Meghan na ọgọ ya nwoke bụ Harry, onye kwuburu okwu banyere ụdị ịhụnanya ọ nwere n'ebe nne di ya nọ.
Onye na-ese ihe nkiri na-abụkarị ihe nkwado maka di na nwunye ahụ, ọkachasị mgbe mkpebi ha dị mkpa ịhapụ ọchịchị ha n'oge gara aga - ma gafee ọdọ mmiri ahụ na United States.
Na mgbakwunye na mmekọrịta chiri anya na Duke na Duchess nke Sussex, a sịrị na Doria nwere njikọ dị ụtọ na akụkọ telivishọn Oprah Winfrey, bụ onye gbara Harry na Meghan ajụjụ ọnụ maka CBS na March.
N’oge a na-agba ha ajụjụ ọnụ, ndi Sussex bidoro ọtụtụ ebubo megide ezinụlọ Royal, tinyere ebubo ịkpa oke agbụrụ na ahụike ọgụgụ isi.
Ọbụna o dugara Harry na-ajụ nwanne ya nwoke bụ Prince William na nna ya bụ Prince Charles, bụ ndị ọ kọwara na ha "tọrọ atọ" n'ime usoro ọchịchị.
Doria Ragland mere ka Oprah Winfrey gbawaa mgbe o kwusịrị na 'e nyere ya ego maka ajụjụ ọnụ' (Image: GETTY)
Meghan Markle na Prince Harry na Oprah (Image: GETTY)
Mgbe ha na-ekwu ihe nkiri a, Oprah na Meghan kwetara na ha chọrọ ịjụ ọnụ, mana ndị kabinet emechila arịrịọ ndị gara aga.
Ma tupu ajuju a, a manyere Oprah ikwu okwu mgbe amachibidoro na ya "nyere" Doria "ego iji mee ka nwa ya nwanyị gbaa ajụjụ ọnụ site na mgbasa ozi.
N'ọnwa Febụwarị, o kwuru na ọ "masịrị akụkọ a" na Oprah na-achọ itinye Doria na ntụkwasị obi ya site n'inye ya "onyinye".
O kwukwara, sị, “knownu maara ihe onyinye ndị ahụ bụ?
Justin: Mama Meghan bụ Doria zigaara Thomas Markle akwụkwọ ozi mgbe Archie mụsịrị
Doria Ragland na Archie, nwa nwa ya (Image: GETTY)
“Maka nri ehihie anyị nwere ihe eji megharịa ọnụ na kumquats wee sị, 'Ahụrụ m kumquats n'anya,' m wee sị, 'Enwere m osisi kumquat, ị chọrọ kumquats?
Maka ndị niile kwuru na m nyere ya onyinye, ana m achọ inye ya ego maka ajụjụ ọnụ, ha bụ kumquats. "
Duchess nke Sussex toro nne ya n'oge gara aga, na-akọwa ya dị ka 'ezigbo enyi' ya, mgbe naanị ya bụ onye otu ezinụlọ Meghan gara agbamakwụkwọ ya na Harry.
A kpọkwara Doria mgbe ya na Oprah gbara ajụjụ ọnụ na CBS, ebe Meghan toro ya maka ịghara ikwu okwu n'ihu ọha, n'agbanyeghị 'mmụọ' gbara ndị ezinụlọ ya gburugburu.
O chetara na “ị nụbeghị ka [Doria] kwuru okwu,” na-agbakwunye na nne ya “gbachiri nkịtị n’ime afọ anọ” ka ọ na-ele nwa ya nwanyị ịlụ ọgụ maka nrụgide nke ndụ eze.
B MGHIS MISS:
Doria 'anọghị oke' dị ka Harry si chọọ Meghan [Insight]
Doria Ragland 'siri ike' na Meghan agaghị efe UK [Analysis]
Nkwupụta Meghan 'tọrọ atọ' n'okpuru ọkụ dị ka onye enyemaka na-akọ isi nleta Doria [Ọhụrụ]
Meghan Markle na Prince Harry webatara Archie (Image: GETTY)
Mgbe mkparịta ụka ahụ gbawara agbawa, akụkọ amaliteghachila n'ihe Doria kwuru banyere mkpebi Harry na Meghan mere ka ha hapụ ezinụlọ Royal n'afọ gara aga.
N'ikwupụta ọchịchọ iduzi "nnwere onwe ego", di na nwunye ahụ hapụrụ ọkwá ha dị elu wee nwee ọlụ ọma na Spotify na Netflix.
Na Doria n'onwe ya "na-echegbu onwe ya" banyere Meghan, onye nyocha kwuru, na "ọ nwere obi iru ala na nwa ya nwanyị na-etinye ahụike na ahụike ya mbụ."
Enyi ahụ gwara Daily Mail na 'atụmatụ' Meghan 'ga-emecha hapụ UK wee wulite alaeze ya na Harry'.
Meghan Markle na Prince Harry na Archie (Image: GETTY)
Ha gbakwunyere ozugbo agbasasịrị nke afọ gara aga: “Doria chọrọ n'ezie ịbụ eziokwu nye onwe ya, ya mere ọ ga-aga n'ihu na-agba Meghan ume ka ọ banye n'okporo ụzọ na-emeghị njem. "
A maara Harry n'onwe ya na Doria nwere ezigbo mmekọrịta, akụkọ sitere na afọ gara aga kwuru na ọ kpọrọ nne nne nne ya.
Dabere na The Sun, onye ọzọ nyocha kọwara Doria dị ka "njem zuru oke" - "ọ bụghị naanị maka Meghan kamakwa maka Harry".
Isi iyi gara n'ihu, "O doro anya na o nweghi nne ga - agakwuru maka ndụmọdụ, mana ọ nọ nso mgbe niile na Doria ma karịa karịa ugbu a.
“Harry nwere nkwanye ùgwù dị ukwuu maka ya na mkpebi ikpe ya, ọ bụ ya mere ya na Meghan ji gwa ya okwu n’oge niile ha na-eme atụmatụ ịme. "
Ha kwukwara, sị: 'Ọ bụ ezigbo ọnọdụ udo ma Meghan na Harry tụkwasịrị ya obi na ikpe ya 100%. "
Edemede a pụtara izizi (na Bekee) na https://www.express.co.uk/news/royal/1446717/doria-ragland-news-oprah-winfrey-interview-meghan-markle-bribe-prince-harry -cbs -spt
Belgium: Ọnwụ nke Sanda Dia: yigharịrị oge ọhụụ na faịlụ nke juru Flanders anya
Geraldine Nakache: ihe mere onye omee ji enwe oke nkụda mmụọ mgbe ihe nkiri ikpeazụ ya gasịrị